China, July 2, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kubva kuvandudza blog yangu uye kuisa WordPress paAmazon S3, ini ndagona kubvisa caching plugins. Iwo ma caching plugins akaita zvisirizvo achienzanisa nekusundidzira mifanikiso yangu yese kuS3. (Bhiri rangu remwedzi wekutanga: $ 0.50). Ndinoona kuti caching inogona kusvina kumwe kuwedzera kuita kunze kwenzvimbo yangu ... asi zvaizonditadzisa kukwidziridza saiti nekugadzirisa kweiyo iPhone, Blackberry, uye zvimwe nhare mbozha. Nyaya iripo ndeyekuti mushanyi mumwe anogona
Zvinotaridza svondo rega rega ndiri kurodha pasi imwe yekuvandudza sevhisi yeVista. Chazhinji munguva pfupi yapfuura, Vista yaive neService Pack pazuva rimwe chetero iro Apple yaive neyakagadziriswa yavo 10.5.3 yeOS X Leopard. Kubva pakuvandudzwa kweLeopard, ndanga ndichive nematoni ezvinyorwa ndichishandisa bhurawuza… ingave iri Safari kana Firefox. Nhasi ndafunga kudzorera Safari kuti ndione kana ndichigona kugadzirisa izvi kamwechete uye zvachose. Pandakatanga kuisirwa, ndaive
Vatengi vedu vanoshandisa PCAnywhere yezvinhu zvavo zvekutsigira. Ndiri kumhanya Vista - saka pandakaedza kurodha yedu ine rezinesi mutengi, ndakakurumidza kusangana neshoko risingapindirane uye mugadziri akarega. Mukushanyira saiti yeSymantec, ivo zvirokwazvo vakagadzirisa nyaya yekuenderana pamwe nekukwiridzira kune vhezheni 12.1. Iyo nyoka? Iwe unofanirwa kubhadhara $ 100 yekuvandudza. Ndinofanira kuva nayo, saka ndakabhadhara $ 100 yacho. Kubhadhara $ 100 ye